आँखा, कान, नाक र घाँटीका पहिलो विशेषज्ञ डा. लक्ष्मीनारायण प्रसादको जीवनकथा – नरेन्द्रराज प्रसाई – HKNepal.com – First Nepali Internet Magazine Hong Kong | एचकेनेपाल डट कम
आँखा, कान, नाक र घाँटीका पहिलो विशेषज्ञ डा. लक्ष्मीनारायण प्रसादको जीवनकथा – नरेन्द्रराज प्रसाई
१ पुष २०७३, शुक्रबार १९:२९
डा. लक्ष्मीनारायण प्रसाद नेपाली
डा. लक्ष्मीनारायण प्रसाद नेपाली धरामा मन, वचन र कर्ममा समर्पित नाउँ हो । उनी समाज सेवाका फाँटमा एक जना सुपरिचित व्यक्तित्व थिए।
डा.द्वारिकाप्रसाद श्रीवास्तव र आमा सुनैनादेवीका सुपुत्रका रुपमा लक्ष्मीनारायणको जन्म १९८६ साल माघ ५ गते रौतहटमा भएको थियो । अनि उनको बिवाह उन्नाईस वर्षको उमेरमा किरणमइदेवीसँग भएको थियो।
समाजसेवामा जुट्ता डा.प्रसाद कलिलै थिए । यी सानैदेखि हाटबजार डुल्थे र गाउँ पनि डुल्थे । साथीहरूसँग मिलेर यी गरीवका घरघर पुग्थे । अनि घरमा गएर उनी आफ्ना बाबुआमासंग म ठूलो भएर डाक्टर हुन्छु र जनसेवा गर्छु भन्थे । अनि यी काममा मिहेनत पनि त्यतिकै गर्थे । त्यसैले बाबुआमाले पनि यिनको कुरा पत्याउँथे।
डा.प्रसाद फेरि गाउँघरमा डुलेर ओछ्यानमा सुतिरहेका बुढाबुढी बिरामीलाई भन्थे म ठूलो भएपछि डाक्टर बन्छु, अनि तपाईलाई निको पार्छुयिनका कुराले भुईंछुँदा बिरामी खुसी हुन्थे र खुसीले रुन्थे । मान्छेहरू बालकका सत्य तथा कच्चा कुराले आफुलाई आनन्दित ठान्थे । वास्तवमा लक्ष्मीनारायण प्रसादले आफ्नो बाल्यावस्था यसरी नै बिताएका थिए।
डा.प्रसादले मनोविज्ञानमा आधारित जनसेवा गरेर नै कलेज पढ्न फट्का हाले । यिनले पटना साइन्स कलेजमा पढे र पटना मेडिकल कलेजबाट एम्बीबीएस गरे । अनि यी लण्डनबाट नाक, कान, घाँटी र आँखा विषयका विशेषज्ञ भए।
डा.प्रसाद लोकहितका काममा बढी जुटे । यिनले आफ्नो दक्षता भ्याएसम्म नेपाली माटोमा नै देखाए । नेपालमा मात्र होइन, काम गरेर यिनले विदेशबाट पनि प्रशंसा बटुले । किनभने सेवा भनेपछि यी राष्ट्र परराष्ट्र जहाँ पनि खट्थे।
डा.प्रसाद नेपालको पहिलो आँखा, कान, नाक र घाँटी विशेषज्ञ थिए। यिनकै पहलमा वीर अस्पतालमा आँखा, कान, नाक र घाँटीको स्थापना भएको थियो । साथै उनैले नेपालमा पहिलो बहिरा स्कूलको स्थापना पनि गरे । नेपाल अन्ध अपाङ्ग संघ, नेपाल अन्धा कल्याण संघ, सुस्त श्रवण कल्याण संस्था, नेपाल ल्यारिङ्गजेक्टोमी संघ, इम्प्याक्ट नेपाल, वीपी कोइराला नेत्र प्रतिष्ठानजस्ता महत्वपूर्ण संस्थाहरूको स्थापनामा उनको गुरुत्तर भूमिका रहेको थियो । उनले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष, नेपाल रेडक्रस रक्त सञ्चार केन्द्रका अध्यक्ष, वीपी कोइराला लायन्स नेत्र अध्ययन प्रतिष्ठानका अध्यक्षको हैसियतले पनि पर्याप्त सेवा गरेका थिए।
डा.प्रसाद हिम्मती, मिहेनती र त्यागी थिए । यी समाज र राष्ट्र उठाउने नैतिक कुरा मात्र सिक्थे । यसै गरी यी उठ्तै आए । यिनले गर्नुपर्ने असल र राम्रो काम गर्दै आए । यी गर्दा एउटा सकारात्मक काम गर्थे र जनसेवा गर्दागर्दै यी वीर अस्पताल संचालक समितिको अध्यक्ष भए । साथै यी त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र पनि छिरे र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा पुगे । त्यहाँ संचालित पोस्ट ग्राजुएट (एमबीबीएस पछिको विशेष तालिम) कार्यक्रमको यी अध्यक्ष भए । साथै यी नेपाल चिकित्सक संघको अध्यक्षमा पनि चुनिएका थिए।
समाजसेवामा भएका उन्नतिबाट खुसी हुने डा.प्रसाद एउटा होनाहार र सक्कली जनसेवक थिए । तर यी नोकरशाही प्रवित्तमा हुर्केका समाजसेवाका अधिकारीतन्त्रको बोलबालावाट सारै चिन्तित थिए । यति हुँदाहुँदै पनि यी हात बा“धेर कहिल्यै बसेनन् । यी कोशी हिंडेझै एक्लै आफ्नो यात्रामा अवरिल हिंडिरहे।
डा.प्रसाद खास गरेर दृष्टिविहीन अपाङ्गका भर थिए । उनीहरूका यी एउटा सुन्दर गोरेटो नै थिए । त्यसैले दीनहीनबाट बामे सरिरहेका व्यक्तिले यीबाट प्रेरणा पाए । पर्यवेक्षकहरूको दृष्टिमा समाजसेवाको ब्यवहार वा काम डा.प्रसादको नैर्सर्गिक गुण थियो । त्यसैले २०४६ सालपछि उनलाई नेपाली कांग्रेसले सांसद पनि बनाएको थियो।
डा. प्रासदले समाजहितका अनेक काम गरे । तर पनि यी बढीभन्दा बढी अपाङ्गगहरूको सेवामा लागि परे । दृष्टिविहीनहरूको कल्याण गर्न यी निरन्तर जुटे । यसै प्रशंगलाई लिएर यिनले संस्था स्थापना गरे । अनि रातोदिनको मिहेनतका कारण यिनले नेपाल अन्धा कल्याण सङ्घलाई छिटै देशविदेशमा चिनाइदिए । त्यसै संघद्वारा यिनले दृष्टिविहीनहरूको हितका लागि पाइला चाले । यिनले ठाउँ ठाउँ रबाट चन्दा लिए र दृष्टिविहीन विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति राखिदिए।
नेपाल अन्धा कल्याण संघद्वारा डा.प्रसादले विविध कार्यक्रम जनस्तरमा ल्याए । यिनले दृष्टिविहीनहरूलाई आत्मनिर्भर गराउन योजना बनाए । यिनैले दृष्टिविहीनहरूलाई आर्थिक कष्टबाट मुक्त दिलाउन त्यसतर्फ कदम चाले । अनि यिनले दृष्टिविहीनहरूको समग्र विकासमा जोड दिन थाले । वास्तवमा यी दृष्टिविहीनहरूको उपचार र रोकथाममा बाह्रै मास लाग्थे।
दृष्टिविहीनहरूलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नेतिर डा.प्रसाद उन्मुख भए । दृष्टिविहीनहरूले पढ्ने ब्रेल पुस्तक छाप्न यी तम्सन थाले । यिनकै सकृयतामा नेपाल अन्धा कल्याण सङ्घमा एउटा ब्रेल छापाखाना पनि खुल्यो।
डा.प्रसादले दृष्टिविहीनहरूका लागि निरन्तर सेवामुखी कामहरू गरे । उनी दृष्टिविहीनहरूको सेवा गर्न विभिन्न ठाउँ गए । कतै दृष्टिविहीन बालक भेट्ता उनी दृष्टिविहीन स्कूल पुर्‍याउन जोड गर्थे र स्कूल भर्ना पनि गरिदिन्थे । यस्ता कामहरू साक्षत बनाउन यिनले विदेशबाट विभिन्न कार्यक्रम र सुविधा माग्थे । अनि त्यो पनि यिनले दृष्टिविहीनहरूका हातमा थुपार्थे।
डा.प्रसादले साहित्य पनि लेखे । उनका केही फुटकर रचनाहरु पनि प्रकाशनमा आए । कृतिगत रुपमा उनको एउटा प्रबन्धसङ्ग्रह ‘स्वस्थ्यजीवन’ २०६२ सालमा प्रकाशित भएको थियो । साथै उनको ‘कथाबाटिका’ नामक (कथासङ्ग्रह : २०६३) प्रकाशनमा आयो । अनि उनले चिकित्सा विषयक पनि किताव लेखे । आफ्नो प्रविधिक पेसाका बारे उनले अनेको लेखरचनाको निर्माण गरेका थिए।
सेवा गर्दा डा.प्रसादले नेपालबाट धेरै पुरस्कार र विभूषण पाए । साथै उनले अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त हेलेन केलर अन्नि सुलिभान पुरस्कार र जापानको बिख्यात ताकियो इवाहासि पुरस्कार आदिबाट पनि उनी सम्मानित भएका थिए।
डा.लक्ष्मीनारायणप्रसाद २०६४ साल फागुन २० गते हृदयघातबाट काठमाडौंमा स्वर्गीय भए।
नयाँ गोर्खा सैनिकको शपथ, अफगानिस्तान मिसन पूरा गरेका गोर्खा सैनिकहरु अभिनन्दित…
दीपकराज र दीपाश्री सम्बन्धको रहस्य खुल्यो, उनीहरु यसरी छन् ‘डिप लभ’ मा…